विषालु बगैँचा : जहाँका फूल सुँघ्दा मान्छेको मृत्यु हुन्छ ! - नागरिक रैबार
विषालु बगैँचा : जहाँका फूल सुँघ्दा मान्छेको मृत्यु हुन्छ !
काठमाडौं । पृथ्वीमा यस्ता धेरै रहस्यमय ठाउँहरु छन् जहाँ मानिसको ज्यानलाई नै खतरा हुन्छ । त्यहाँ पुग्दैमा मान्छेको मृत्यु हुन्छ ।
बेलायतमा एउटा यस्तो बगैँचा छ जहाँ गएर मज्जाले स्वास लिँदा समेत मानिसको मृत्यु हुन्छ । अहिलेसम्म सो बगैँचामा १ सय भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भैसकेको छ ।
बेलायतको नर्थअम्बरल्याण्डमा रहेको उक्त बगैँचाको नाम अल्नविक पोइजन गार्डेन हो । यसलाई विष बगैँचा भनेर पनि चिनिन्छ ।
यसलाई संसारको सबैभन्दा खतरनाक बगैँचा मानिन्छ । तर पनि यो बेलायतको सबैभन्दा सुन्दर आकर्षण मध्ये एक रहेको छ । बगैँचाभित्र रहेका रंगीविरंगी बोटविरुवा, सुगन्धित गुलाब तथा अन्य फूलहरुले आकर्षित गरिरहेका हुन्छन् ।
यो बगैँचामा एउटा कालो फलामको ढोका छ । उक्त ढोकामा प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ कि उभिएर फूललाई सुँघ्न तथा टिप्न निषेध छ । साथै त्यसमा खतराको चिन्ह पनि दिइएको छ ।
१४ एक्कडमा फैलिएको उक्त बगैँचामा करीब ७ सय विषालु वनस्पती छन् । इतिहासमा सत्रुहरुलाई मार्नका लागि यी विषाक्त फूलहरुको प्रयोग गरिन्थ्यो ।
यो बगैँचामा गएर अहिलेसम्म १ सय भन्दा धेरै मानिसहरुको मृत्यु भैसकेको छ । थोरैमात्र पनि गल्तीले बगैँचामा मानिसको मृत्यु हुनसक्दछ । एजेन्सीको सहयोगमा
मतगणना सुरु : ३ बजे भित्र परिणाम आउने
एमालेमा ओलीले ४०० मत ल्याउँदा रावललाई ४२ मात्रै
बाजुरा एमाले जिल्ला प्रतिनिधी आएका २६ जनाले गरे समाजवादीमा प्रवेश
ऐतिहासिक देउडा गीत बाजुरा बैकुण्ठ रैछ सार्वजनिक (भिडियो सहित)
मार्तडीमा खेलमैदानको लागि जग्गा छनोटको प्रतिवेदन सार्वजनिक
आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय
मार्तडीमा खेलमैदान निर्माणका लागि जग्गा छनोट गरिदै
बाजुरामा भुवापर्व सूरु [भिडियोसहित]
वैज्ञानिकले बनाए हावामा उड्ने डुुङ्गा
काठमाडौं । डुुङ्गा भन्ने बित्तिकै पानीमा तैरिएर चल्ने साधन बुझिन्छ । तर अब पानीमा तैरिने मात्र होइन हावामा उड्ने डुुङ्गा पनि छिटै आउँदैछ । इटालीको एक कम्पनीले एउटा विशेष डुुङ्गा बनाउँदैछ जुन हावामा उड्नेछ । उक्त लक्जरी याच समुुद्रमा तैरिनुका साथै हावामा पनि उड्न सक्ने बताइएको छ । उक्त एयर याच (ब्ष्च थ्बतअज) को लम्बाई […]
करोडपति परेवा, जसको नाममा सयौं बिघा जमीन र लाखौँ नगद
मानिसको नाममा लाखौं करोडौंको सम्पत्ति हुनु अनौठो होइन । तर जनावर तथा चराचुरुंगीको नाममा करोडौंको सम्पत्ति हुनु चाहीँ आश्चर्य नै हो । यस्तै आश्चर्य छिमेकी मुलुक भारतमा छ । त्यहाँ करोडपति परेवाहरू छन् । पत्यार नलाग्न सक्दछ, तर ती परेवाहरू यति धनी छन् कि उनीहरूको नाममा दर्जनौं पसलहरू, सयौं बिघा जमिन र लाखौँ रुपैयाँ नगद […]
अष्ट्रेलियामा भेटियो संसारकै पहिलो अनौठो जीव, १,३०६ वटा छन् खुट्टा !
काठमाडौं । पृथ्वीमा कैयन् यस्ता अनौठा तथा दुर्लभ जीवहरु छन् जसका बारेमा आम मानिसलाई थाहै हुँदैन । कतिपय यस्ता जीवहरु त वैज्ञानिकहरुले बल्ल पत्ता लगाउँदै छन् । यस्तै एउटा जीव हालै फेला परेको छ । उक्त जीवको सरीरमा १३ सय ६ वटा खुट्टा छन् । सो जीव जमीनमुनि निकै गहिराइमा बस्दछ । अष्ट्रेलियाका जीव वैज्ञानिकहरुले […]
अनौठो समुद्र जहाँ चाहेर पनि डुबिँदैन !
काठमाडौं। भनिन्छ एक अब्बल पौडीबाजले मात्रै समुद्रको खास मज्जा लिन सक्दछ । यदि तपाईलाई राम्रोसँग पौडिन आउँदैन भने त तपाईले समुद्रमा पौडिने मज्जा लिने बारेमा सोँच्न पनि सक्नुहुन्न । तर आज हामी तपाईलाई एउटा यस्तो समुद्रका बारेमा बताउँदैछौँ जहाँ पौडी खेल्न नजान्ने मानिस पनि तैरिन सक्दछ र समुद्रको मज्जा लुट्न सक्दछ । खासमा यो समुद्रमा […]
यो हो मुठीमै अट्ने विश्वको सबैभन्दा सानो हेलिकोप्टर, मूल्य डेढ करोड
संसारमा एक से एक अब्बल हेलिकोप्टरहरु छन्ज समध्ये कतिको आकार कारजत्रै त कतिको ठूलो ट्रक जत्रो पनि हुन्छ । तर अहिले संसारमा एउटा यस्तो हेलिकप्टर जसको आकार केवल तपाइँको मुठ्ठीजत्रै छ । अझ अनौठो त के भने यो मुठ्ठीभरको हेलिकप्टरको मूल्य चाहीँ वास्तविक हेलिकप्टर जत्ति नै छ । यो विचित्रको हेलिकप्टरको आकार मुठ्ठीमा अट्ने भएपछि […]
७७ वर्षका वृद्धसँग २० वर्षीया युवतीको रोचक प्रेम कहानी
प्रेममा न त उमेरले रोक्दछ न त दूरी र जातपातले । यस्तै एक अनौठो प्रेमको कहानी बेलायत र म्यानमारमा दुईजना बीच देखिएको छ । म्यानमारकी एक २० वर्षीया युवती र बेलायतका एक ७७ वर्षका वयोवृद्ध बीच गहिरो प्रेम बसेको छ । ती युवतीको हजुरबा उमेरका ती वृद्धसँग यति गहिरो माया बसेको छ कि अब उनलाई […]
प्रतिनिधि सभा बैठक माघ १६ गतेसम्म स्थगित
कोरोनाको तेस्रो लहर : धमाधम नेताहरू आइसोलेसन
कोरोना संक्रमणका कारण त्रिविका परीक्षा स्थगित नहुने
सडक निर्माण भएपछि एक घण्टाको यात्रा २० मिनेटमा
राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगन
कैलालीमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ५०० नाघ्यो
अनमोलको फिल्म ‘एक्स ९’ को सुटिङ स्थगित
सुदूरपश्चिमले जित्दा आर्मी सेमिफाइनलमा
आज माघे संक्रान्ति, थारु समुदायमा माघीको रौनक
परिवार पाल्न ज्यान हातमा राखेर मुग्लान पस्दै सुदूरपश्चिमेली